प्रिन्स दाहाल इतिहास रच्दै विश्व जुनियर ब्याडमिन्टनको शीर्ष स्थानमा -3ghumti
२०७८, माघ ६ गते बिहिवार
मनोरञ्जन खेलकुद स्वास्थ्य जीवनशैली शिक्षा रोजगार अन्तर्वार्ता पत्रपत्रिका विज्ञान प्रविधि शेयर भिडियो पर्यटन बजार
# सेना समाचार
# सेना अनुशासन
# घुम्ती विशेष
# सैनिक प्रवक्ता
# प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा
# शान्ति सेना
# महिला सैनिक
# प्रधान सेनापति
# प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माविरुद्ध उजुरी
# सेना प्रमुख
# जङ्गी अड्डा
# वार्षिक साधारण सभा
# महालक्ष्मी विकास बैंक
# उपरथी अनन्त कार्की
# सिटिजन्स बैंक
# सैनिक सेवा
# जंगी पोशाक
# भावी प्रधान सेनापति
# सेनाका सिपाही
# सेना परिचालन
# सशस्त्र प्रहरी बल
# एमटी गण
# अन्तरिम आदेश
प्रिन्स दाहाल इतिहास रच्दै विश्व जुनियर...
तीन घुम्ती डेक्स्
पौष २९, २०७८ बिहिवार ०९:३३ बजे
काठमाडौँ l ब्याडमिन्टनमा इतिहास रचेर नेपालका प्रिन्स दाहाल विश्व ब्याडमिन्टनको जुनियरतर्फको बरियतामा शीर्ष स्थानमा उक्लिएका छन् । विश्व ब्याडमिन्टन महासङ्घले जारी गरेको पुरुष जुनियरतर्फको बरियताअनुसार १९ वर्षीय दाहाल पहिलो पटक शीर्ष स्थानमा उक्लिएका हुन् । उनको १० हजार पाँच सय अङ्क रहेको छ ।
महासङ्घले जारी गरेको बरियताअनुसार जुनियरतर्फ दोस्रो बरियतामा मलेसियाका जस्टिन होह छन् । उनको नौ हजार पाँच सय ९० अङ्क रहेको छ । यस्तै मलेसियाकै फाजरिक मोहमद रजिफ ६ हजार नौ सय २५ अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छन् । फ्रान्सका एलेक्स लानिर ६हजार सात सय अङ्कका साथ चौथो तथा भारतका एस शङ्कर मुथुसामी सुब्रमन्यम ६ हजार ३४० अङ्कसहित पाँचौँ स्थानमा छन् ।
विश्व ब्याडमिन्टनको जुनियरतर्फ शीर्ष खेलाडी बनेपछि दाहालले आफ्नो सपना पूरा भएको बताउँदै आफू विश्वकै एक नम्बर खेलाडी बन्ने उद्देश्यका साथ खेल्दै आएको र त्यो पूरा हुँदा अत्यन्त खुसी लागेको खुलासा गरे । अबको ध्यान बरियतालाई कायमै राख्नतर्फ रहने भन्दै दाहालले भविष्यमा सिनियर ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा समेत प्रदर्शन राम्रो गर्दै जाने बताए ।
नेपालमा प्रतियोगिताको अभाव तथा राम्रो प्रशिक्षण पाउन मुश्किल भएको दाहालको गुनासो छ । राज्यले खेलाडीका लागि उचित वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि प्रतियोगिता र प्रशिक्षणबाट वञ्चित रहनुपरेको दाहाल बताउँछन् । पाँच वर्षको उमेरमै दार्चुलाबाट ब्याडमिन्टन खेल्न थालेका दाहाल हाल काठमाडौंमै अध्ययनरत छन् ।
नेपालका जुनियर खेलाडी दाहालले पाएको यो नै नेपाली ब्याडमिन्टनले हालसम्म पाएको सर्वाधिक ठूलो सफलता हो । व्यक्तिगत तथा देशकै लागि उल्लेख्य उपलब्धि भएको दाहालका मामा एवं व्यवस्थापक कमलेश निरौलाको ठम्याइ छ । ब्याडमिन्टन प्रशिक्षक जयन्त श्रेष्ठले दाहालको सफलताले अन्य नेपाली ब्याडमिन्टन खेलाडीलाई हौसला मिलेको बताए । दाहालको सफलताले नेपालको समग्र खेल जगत्लाई नै उत्साहित बनाएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
दाहाल हालसम्म कुनै पनि विभागिय क्लबमा आबद्ध छैनन् । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट नै ब्याडमिन्टन खेल्दै आएका छन् । विसं २०७६ मङ्सिरमा जारी विश्व बरियतामा दाहाल पहिलोपटक ३२औँ स्थानमा रहन सफल भएका थिए । त्यही वर्ष पुसमा जारी बरियतामा उनी १४औँ स्थानमा तथा पुस अन्तिम साताको बरियतामा दाहाल १०औँ स्थानमा उक्लिएका थिए । विसं २०७६ चैतमा महासङ्घले जारी गरेको बरियतामा दाहाल सातौँ स्थान तथा गत वर्ष माघमा उनी तेस्रो स्थानमा उक्लिन सफल भएका थिए । त्यतिबेला दाहालभन्दा अब्बल डेनमार्कका म्याड्स जोएल मुलर तथा भारतका वरुण कपुर थिए । मुलर शीर्ष स्थानमा तथा कपुर दोस्रो स्थानमा थिए । दुवै जना हाल सिनियर प्रतियोगिता खेल्दै आएका छन् ।
विश्व ब्याडमिन्टन महासङ्घले प्रत्येक साता विश्वभरका जुनियर तथा सिनियर खेलाडीको बरियता सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । दाहाल हाल ललितपुरको लगनखेलस्थित पिनागल कलेजमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत छन् । यस्तै विश्व ब्याडमिन्टन महासङ्घले जारी गरेको जारी गरेको महिला जुनियरतर्फको बरियताअनुसार नेपालकी महिला खेलाडी रसिला महर्जन १९औँ स्थानमा पर्न सफल भएकी छन् ।
# प्रिन्स दाहाल
# जुनियर ब्याडमिन्टन
ए डिभिजनमा आज दुई खेल, पहिलो खेलमा एपीएफ र हिमालयन शेर्पा भिड्दै
अफगान टोलीले अन्ततः भिसा पायो, अण्डर १९ विश्वकपकालागि वेस्टइण्डिज जाँदै
पिएम टी २० आजदेखि , उद्घाटन खेलमा आर्मी र कर्णाली प्रदेश भिड्दै
'ए' डिभिजन लिगमा आजदेखि आठौं चरणका खेल खेलिदै, पहिलो खेलमा संकटा र सातदोबाटो भिड्दै
सीके राउतको हत्या गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री यादवको चेतावनी!
सफल ब्यबस्थापकका खम्बा प्रदिप बस्नेत
युवा संघका असन्तुष्ट पदाधिकारी पार्टी नेतृत्वको शरणमा, पौडेलसहितको निर्णयमा हस्तक्षेपको माग
सरकारले राख्याे ७ कम्पनीलाई कालोसूचीमा, ३ वर्षसम्म कुनै पनि काम गर्न नपाउने
सेना-प्रहरीलाई एक हप्तामै स्मार्ट लाइसेन्स
प्रकाशमान सिंह गृहमन्त्री !
एमटी गणको कथाव्यथा कसले सुन्ला चिफसाब ?
सशस्त्रमा फेरि हाकिम थप्ने खेल शुरु
मन्त्रिपरिषदमा पुग्याे भावी प्रधान सेनापतिकाे फाइल
सावधान ! सिटिजन्स बैंकमा पैसा राख्नुभएको छ ?
पूर्वयुवराज्ञी हिमानी अमेरिकामा, यस्तो देखियो ‘क्रेज’
सरकारको निर्देशन विपरित ‘जंगी पोशाक’
फोन/फ्याक्स : ०१-५७०५९४९ / ९८५१०५८४०१
तीन घुम्ती - Teen Ghumti
Copyright © 2022 All right reserved to3ghumti.com Site By: SobizTrend Technology